June 2013 ~ ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
7:57:00 AM နည်းပညာ No comments
windows7and windows 8 ကို usd device နဲ့ တင်နိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ်မှာ 4GB အထက်
USB Device လေးတခုနဲ့ (32bit အတွက်ဆိုရင် 4GB အောက်ဆိုရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်)မိမိထည့်သွင်းလိုတဲ့ windows7or 8 ISO ဖိုင်တခုရှိရင် လုံလောက်ပါပြီ။
windows7 USB DVD- tool ကို ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။
ပြီးရင် သူကို install လုပ်လိုက်ပါ..။ ပြီးရင် သူ့ကိုဖွင့်လိုက်ပါ..။
အခုလို ကျလာပါလိမ့်မယ်..။အဲဒီအထဲက Browes ကနေ windows ISO ဖိုင်ကို ရွေးလိုက်ပါ..
ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း windows ISO ဖိုင်ကိုရွေးပြီး open ကို click လိုက်ပါ..။
ဒီအဆင့်မှာ USB deivice ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ..။
ကိုထည့်သွင်းလိုတဲ့ USB deivice name ကိုရွေးပေးရမှာပါ..။(ဥပမာ) D. E တို့ပေါ့..။
ပြီးရင် ထိုင်စောင့်နေယုံပါပဲ..။100% ပြည့်သွားရင် ကိုယ့်မှာ windows Install လုပ်နိုင်တဲ့
USB deivice လေးတခု ပိုင်ဆိုင်သွားပြီပေါ့..။windows iso ဖိုင်မရှိသေးဘူးဆိုရင် windows 8 ကို ဒီကနေ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်..။
AutoCAD 2014 with Crack/Activator Full Version
6:25:00 AM software No comments
latest ဖြစ်တဲ့ software တွေကိုနှစ်သက်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် AutoCAD 2014 ကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
နှစ်ပိုင်ခွဲပြီးတင်ထားတာပါ..။လိုအပ်ရင် အပိုင်း ၁ ကို ဒီမှာ ယူပါ..။အပိုင်း ၂ ကို ဒီမှာ ယူပါ..။
ဒီနေ့ထွက်တဲ့ IDM latest update version လေးပါ..။
ကြည့်လိုက်ပါ..။ IDM latest update 6,17 ကို ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။အဆင်မပြေရင် စာရေးထားခဲ့ပါ..။
5:44:00 PM photoshop No comments
Adobe Photoshop CS6 13.1.2 Extended Final Portable. လေးပါ..။
မနေ့က 64bit အတွက် တင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ..။
အခု 32bit အတွက်ပါ..။
Portable လေးဖြစ်လို့ ကီးအတွက်လည်း ဘာမှစိတ်ညစ်စရာမရှိပါ..။
Advanced SystemCare Pro Final Fully Activated Portable
7:22:00 AM software No comments
Advanced SystemCare Pro v6.3.0.269 Final Fully Activated Portable လေးပါ..။သူကိုတော့ အားလုံးသိကြမယ်ထင်ပါတယ်..။Portable ဆိုပေမယ့် Fully Activated Portable ဖြစ်တာကြောင့် Full version အတိုင်းပါပဲ။ သူရဲ့ အသုံးဝင်ပုံတွေကိုတော့ ကျနော်စကားလုံးတွေနဲ့ ပေါ်ပြလို့ ပြည့်စုံမယ်မထင်ပါ..။ဒီတော့ ကိုယ်တိုင်သာ သုံးကြည့်ပါလို့ ပဲပြောပါရစေ..။mediafire ကနေတင်ပေးထားပါတယ်..။လိုချင်ရင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ်..။
Adobe Photoshop CS6 13.1.2 Extended Final Portable.
6:36:00 PM photoshop No comments
Adobe Photoshop CS6 13.1.2 Extended Final Portable. လေးမျှဝေလိုက်ပါတယ်..။ကျနော်ကိုယ်တိုင်အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ဟာပါ..။
Portable လေးဖြစ်လို့ ကီးအတွက်လည်း ဘာမှစိတ်ညစ်စရာမရှိပါ..။အခု 64bits အတွက်ပါ..32bits အတွက်မနက်ဖြန်တင်ပေးပါ့မယ်..။ mediafire ကနေတင်ပေးထားပါတယ်..
လိုအပ်ရင် ဒီမှာယူလိုက်ပါ ။အဆင်မပြေတာရှိခဲ့ရင် စာရေးထားခဲ့ပါ..။
8:05:00 AM software No comments
ကွန်ပျူတာသုံးသူတိုင်း မရှိမဖြစ်တဲ့ WinRAR Full version 4.20 Final with Patch လေးပါ။
ဒီလောက်ဆိုရင် သူရဲ့အသုံးဝင်ပုံကို သိလောက်ပါပြီ။
လိုအပ်ရင် ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ။ အဆင်မပြေတာရှိခဲ့ရင် စာရေးထားခဲ့ပါ..။
7:43:00 AM software No comments
သီချင်းတွေနဲ့ ကိုယ်ရဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေကို သက်ဝင်လာအောင် ဖန်တီးပေးမဲ့ software လေးပါ..။
Crack ဖိုင်လေးနဲ့ full version ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်...။
patch လေးကိုဖွင့်လိုက်ရင် အခုလိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်..။crack ကိုနှိပ်လိုက်ပြီး
C:\_ Program Files (x86)\_Wondershare\_DVD Slideshow Builder Deluxe ကိုတဆင့်ချင်းသွားပြီး open ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..။
အခုဆိုရင် Full version ဖြစ်သွားပါပြီ..။
Add files ကနေ ဓါတ်ပုံသွားထည့်ပေးလိုက်ပါ..။ ဓါတ်ပုံရွေးပြီးရင် open ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..။
ဒီအဆင့်မှာတော့ ဓါတ်ပုံရွေးပြီးရင် music ကနေ သီချင်းရွေးလိုက်ပါ..။
သီချင်းရွေးပြီးရင် အပေါ်က Create ကိုသွားပြီး အခုပုံပါအတိုင်း ကြိုက်သလို save နိုင်ပါပြီ..။
အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်..။ လိုချင်ရင် ဒီမှာ ဒေါင်းလိုက်ပါ..။
4:46:00 AM antivirus No comments
AVG Internet Security 2014 ကိုပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်..။windows 8 နဲ့လည်း အလွန်လိုက်ဖက်ပြီး ကီးအတွက်လည်း ပူစရာမလိုပါ..။ လက်ရှိကျနော်လည်း အဲဒါကိုပဲ သုံးနေတာပါ..။
update ဖြစ်ပြီး အလန်းလေးတွေကို နှစ်သက်သူတွေအတွက် အဆင်ပြေမယ် မျော်လင့်ပါတယ်..။mediafire ကနေတင်ပေးထားပါတယ်..။
32bit အတွက်က ဒီမှာယူပါ64bit အတွက် ဒီမှာယူပါ ။
9:10:00 AM windows No comments
windows 8 တင်နည်းရေးပြီး windows 8 ကို ဘယ်ကယူရမလဲ မေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် Windows 8 Pro Full Version လေးကိုပြန် share ပေးလိုက်ပါတယ်..။ 32 bit အတွက် ၃ ပိုင်းနဲ့ 64bit အတွက် ၄ ပိုင်းပါ..
ဒေါင်းလို့ရတဲ့ 32bit သုံးပိုင်းထဲက အပိုင်းတစ်ကို Right click ပေးပြီး Extract here လုပ်ပြီး ဖိုင်ကိုဖြည်လိုက်ပါ..။ 64bit အတွက်ဆိုရင်လည်း အတူတူပါပဲ..။ ရလာမဲ့ Disc Image file လေးကို DVD Burn လိုက်ပါ..။
ဒါဆိုရင် windows 8 DVD တချပ်ရပြီပေါ့...။windows 8 ကိုကိုယ်တိုင် တင်ကြည့်ချင်ရင် ဒီမှာ သွားဖတ်လိုက်ပါ..။အဆင်မပြေတာရှိရင် စာရေးထားခဲ့ပါ..။
5:48:00 PM software No comments
Microsoft Office Professional 2013 ပါ..။23 bit အတွက်ရော 64bit အတွက်ပါ နှစ်ခုလုံးပါ..။အထဲမှာ Activator ဖိုင်လေးပါ ပါတယ်..။ နောက်မှ Activation လုပ်နည်းလေးတင်ပါအုန်းမယ်..။
32bit အတွက် ဒီမှာပါ ။64bit အတွက်က ဒီမှာပါ..။
လိုအပ်ရင် ဒီမှာယူလိုက်ပါ..။ mediafire ကနေတင်ပေးထားပါတယ်..။
12:51:00 AM နည်းပညာ No comments
ပြီရင် Boot ရွေးဖို့အတွက် ကီးတခုကို နှိပ်ထားပါ..။ကွန်ပျူတာ အမျိုးအစားအလိုက် ကီးကကွဲပြားပါတယ်..။hp မှာဆိုရင်တော့ F9 ၊ Acer မှာတော့ F12 ၊အခြားအမျိုးအစားလိုက် ကွဲပြားပါတယ်..။
မရှင်းလင်းတာရှိရင် စာရေးထားခဲ့ပါ..။ windows 8 အသုံးပြုဖို့
လိုအပ်တဲ့ဆောဝဲ့ တွေကို ကျနော်တင်ပေးပါ့မယ်..။
Advanced SystemCare Pro Final Fully Activated Port...
IObit Malware Figher Pro 2
windows 8 အတွက် zawgyi font
windows 8 ကို windows7ပုံစံအတိုင်းသုံးမယ်
windows 8 မှာမြန်မာဖောင့် ပြသနာဖြေရှင်းနည်း
This is My Blog Welcome To My Blogဘာရယ်လို့တော...